HORDHAC : Laganes VS Real Madrid? Xidigaha seegaya, xogta kulanka iyo safafka macquulka ah – Gool FM
HORDHAC : Laganes VS Real Madrid? Xidigaha seegaya, xogta kulanka iyo safafka macquulka ah
( Spain) 15 Abriil 2019 Kooxda Real Madrid aya booqan doonta kooxda Leganes caawa kulan ka tirsan horyaalka Spain ee La Liga oo maraya heer gabaabsi ah.
Real waxa ay heestaan saf dhameestiran mana jiraan ciyaartoy muhiim u ah oo kulankan seegaya halka Laganes ay qaadaneyso waqti wanaagdam madaama aan laga badin sedexdii kulan ee ugu dambeyey.
Guido Carrillo ayaa ka soo laabtay ganaax halka Martin Braithwaite uu ka maqnaan doono kulanka, Youssef En-Nesyri waxa uu kasoo kabsaday dhaawac uu qabay .
Kenneth Omeruo ayaa wali qaba dhaawac jilibka ah, Rodri Tarin ayaa wali loo arkaa in uu yahay mid ku haboon booskaas daafaca.
Oscar Rodriguez ayaan awood u heysan in uu wajaho kooxdiisii hore sababo qandaraaskiisa oo amaah ah, sharciga ayaana ka xanibaya in ka hor imaado Kooxda Mil kayadiisa leh.
Dani Carvajal ayaa si buuxda taam u ah islamarkaana diyaar u ah inuu safto, lakiin Alvaro Odriozola ayaa la filayaa inuu booskiisa sii joogo ka dib qaab ciyaareedkiisii wanaagsanaa ee dhawaanahan.
Marco Asensio iyo Gareth Bale ayaa ku soo bilaaban kara labada garab ee weerarka si ay u taageeraan xidiga joogtada ah ee Karim Benzema.
Marcelo ayaa tartan kula galaya ka soo muuqashada dambeedka daafaca bidix xidiga da’da yar ee Sergio Reguilon, halka Isco uu qarka u saaran yahay inuu kursiga keydka kusoo bilowdo.
Kulanka : Laganes VS Real Madrid ( La Liga)
Goobta : Estadio Municipal de Butarque
Garsoorka : David Medie Jimenez
Leganes ayaa guul daro la’aan ah 12-ka mid ah 13-kii kulan ee ugu dambeeyey ee ay ku ciyaraan garoonkooda kulamada horyaalka (La Liga).
Real Madrid ayaa badisay 17-kii kulan ee ugu dambeeyey ee ay la ciyaarto Kooxaha ka dhisan Maddiid 13-guul iyo 4-bar-baro, halka Leganes ay qasaartay hal ka mid lixdii derby ee ugu dambeyey dhamaan tartamada 3-guul iyo 2-bareejo.
Real aya laga badiyey hal kulan oo ka mid 8-dii kulan ee ugu dambeeyey ee ay ku ciyaarto meel ka baxsan garoonkooda horyaalka La Liga, lix jeer wee ay badiyedn halka kulan ka mid ah ay breejo galeen, kulanka guul darada ayaa aha kulanka Velencia ee 2-1.
Kooxda Laganes ayaan laga badin sedexdii kukan ee ugu dambeeyey horyaalka iyaga oo badinayey labo ka mid ah halka kulanka kale ay bareejo galee, balse waxaa xusid mudan in laga badinayey labo kulan marka laga tago sedexdan kulan ee xiriirka ah.
Muxuu Maxamed Saalax ula jeeday Dabaal degii uu xalay ku sameeyay Taageerayaasha Chelsea!??.....(Ma ahan Raali galin)